ဧဒင်အချစ်ပုံပြင်: ကျေးဇူးပြု၇်ျ ဖတ်ပေးပါ
လူတစ်ယောက်က သူ့ ရဲ့ ကားအသစ်ကို ပေါလစ်တိုက်နေတယ်
အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ ရဲ့ ၆နှစ်အရွယ်သားလေးဟာ ကျောက်ခဲနဲ့ ကားရဲ့ ဘေးခြမ်းမှာ ခြစ်လိုက်တယ်။
သူတော်တော်စိတ်ဆိုးသွားပြီသူ့ သားရဲ့ လက်ကို ဂွနဲ့ သတိမထားမိပဲ အချက်ပေါင်းများစွာ ထုရိုက်မိသွားတယ်
ဆေးရုံးရောက်တော့ သားလေးရဲ့ လက်ချောင်လေးတွေဟာ ကျိုးကြေကုန်လို့ မတတ်သာပဲအကုန်ဖြတ်လိုက်ရရှာတယ်
ဖခင်ကိုတွေ့ တော့ နာကျည်းနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေနဲ့“ဖေဖေ သားရဲ့ လက်ချောင်းတွေ ပြန်ပေါက်လာဦးပါ့မလား”လို့ မေးရှာတယ်
ဒါနဲ့ သူ့ ကားဆီကိုပြန်သွားပြီး သူ့ ရဲ့ ကားအသစ်ကိုအချက်ပေါင်းများစွာကန်တယ်
မောပန်းပြီး ကားအနားမှာငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်း သူ့ ရဲ့ သားငယ်ခြစ်ထားတဲ့ ခဲခြစ်ရာကို ကြည့်မိတယ်။ အဲဒီမှာ ရေးထားတာက.... “ဖေဖေကိုချစ်တယ်”တဲ့။ ။
သူဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်ပဲ နောက်တစ်နေ့ မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်
ဒေါသနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ အကန့် အသတ်ဆိုတာမရှိဘူး
အချစ်ကိုသာရွေးချယ်ပြီး လှပပြီး နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုသာရွေးချယ်ပါ
အရာဝတ္ထုဆိုတာအသုံးပြုဖို့ ၊ လူဆိုတာချစ်ဖို့ ။
ဒါပေမယ့် ယနေ့ လောကကြီးရဲ့ ပြသနာက လူတွေကိုအသုံးပြုပြီး အရာဝတ္ထုတွေကို ချစ်နေကြတယ်
ဒီနေ့ ကစပြီး စိတ်ထဲမှာ သတိထားပြီး မှတ်သားသွားပါ
အရာဝတ္ထုတွေဆိုတာ အသုံးပြုဖို့ ၊ လူတွေဆိုတာ ချစ်ဖို့ ပါ
At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures. When the child saw his father.....with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?' The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked italot of times. Devastated by his own actions.......sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.The next day that man committed suicide. . .
Anger and Love have no limits; choose the latter to haveabeautiful, lovely life..... Things are to be used and people are to be loved. But the problem in today's world is that, People are used and things are loved....
If you don't share this on nothing bad will happen; if you do, you might change someones life.
စတီ ဗင် ဘာသာပြန်ဆိုထားပါသည်။
from-fb MYawady News